Mahamasina : lehilahy tratra nitondra basy vita gasy | NewsMada
Mahamasina : lehilahy tratra nitondra basy vita gasy
Noraisim-potsiny! Tratran’ny polisin’ny UIR teny Mahamasina, ny alakamisy teo ny lehilahy iray antsoina hoe Serba, 29 taona izay voarohirohy ho nitondra basy vita gasy. Nolazainy fa novidiany 100.000 Ar io basy io…
Nahazo loharanom-baovao ny eo anivon’ny polisin’ny UIR fa misy olona mampiahiahy mihaodihaody mitondra basy eny Mahamasina tamin’io fotoana io. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy nanao ny vela-pandrika mba hahafahana misambotra azy. Voasambotra izy niaraka tamin’ny basy vita gasy, iray ary nentina natao famotorana eny amin’ny Surêté urbaine de Tananarive (Sut) Tsaralalana. Niaiky izy, nandritra ny famotorana nataon’ny polisy, fa azy tokoa io basy io. Nohamafisiny kosa fa hoe novidiany 100.000Ar tamin’olon-tsy fantany teny Andavamamba io basy io. Nilaza izy fa mpiambina eny Ambohidratrimo ny asany ary ampiasainy ho fiarovantena io fitaovam-piadiana io.
Saron’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahafito eny 67 ha, afakomaly koa, ny lehilahy iray antsoina hoe Mara Adoudou, 35 taona nitondra môtô halatra teny Ambodin’Isotry. Araka ny fanazavan’ny polisy, very teny 67 ha Atsimo io môtô io ka niantso polisy avy hatrany ny tompony raha vantany vao nahatsikaritra ilay môtô. Nahitana basy kilalao tao anatin’ilay môtô nandritra ny fisavana nataon’ny polisy. Nilaza izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa vao avy nivoaka ny fonjan’Antanimora, ny volana janoary lasa teo.